Madaxweyne Somalia Iyo Wefti Uu Hoggaaminayo Oo Uboqoolay Magaalada Qaahira Ee Dalka Masar Si Ay Uga Qayb Galaan Caleema-saarka,,,,,,,,, |
Madaxweyne Somalia Iyo Wefti Uu Hoggaaminayo Oo Uboqoolay Magaalada Qaahira Ee Dalka Masar Si Ay Uga Qayb Galaan Caleema-saarka,,,,,,,,,
Muqdisho(Somalimedia)Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gellinkii dambe ee Shalay magaalada Qaahira ee dalka Masar, iyadoo booqashadan ay noqonayso tii ugu horreysay oo uu madaxweyne Xasan ugu dhoofo dalkaas tan iyo markii xilka loo doortay sannad ka hor.
Socdaalka madaxweynaha uu ku aaday Masar ayaa lagu sheegay inuu la xiriiro sidii uu uga qaybgeli lahaa calmeemo-saarka madaxweynaha cusub ee dalkaas dhawaan loo doortay, C/fataax Al-Siisi.
Inkastoo madaxweynuhu uusan la hadlin warbaahinta markii uu dhoofayay ayaa haddana mas’uuliyiinta ka tirsan madaxtooyada waxay sheegeen in booqashadan ay qaadan doonto dhowr maalmood.
“Madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay ka qaybgeli doonaan caleemo-saarka C/fataax Al-Siisi oo dhawaan ka dhici doonta Qaahira,” ayaa lagu yiri warka laga soo xigtay xubnaha madaxtooyada Soomaaliya ka tirsan.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh ayaa lagu wadaa inuu la kulmo inta uu ku sugan yahay Qaahira mas’uuliyiin ka tirsan ururka jaamacadda Carabta, isagoo kala hadli doona sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka.
Wafdiga madaxweyne Xasan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku sagootiyay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Sheekh Axmed Maxamed iyo mas’uuliyiin kale oo xukuumadda ka tirsan.